जाडोयाममा हुने डिप्रेसन (Winter Depression) - Khoj Sanchar
डिप्रेसन ठूलो जनस्वास्थ्य समस्या हो । सवै मानिसहरु खुसी हुन चाहन्छन, आनन्दको खोजीमा दौडिरहेका छन, माया गास्न र माया गर्न चाहन्छन । जीन्दगी रमाइलो सँग विताउन चाहान्छन । तर डिप्रेसन भएपछी मन नै खुसी हुदैन, रमाइलो नै लाग्दैन र आनन्द नै आउदैन ।
एकैछिन कल्पना गरौं त ! हामी लाई कुनै कुरामा पनि चाख लाग्दैन र मन रमाउदैन भने कस्तो जीन्दगी हुन्छ होला । डिप्रेसनबाट पिडित व्यक्तिहरुले भन्नु हुन्छ “मलाई कसैको माया लाग्दैन” न श्रीमतीको / न श्रीमानको, न वच्चाको । आफ्नै माया लाग्दैन । जे कुरा पनि झर्को लाग्छ । फ्रेस होउ, राम्रा ड्रेसहरु लगाउ, श्रृगार पटार गरु, साथीभाईहरुलाई भेटु, घुम्न जाउँ, वाहिर गएर डिनर खाउँ, फिल्म हेर्न जाउँ, घरमै टि.भी हेरौ, गीत सुनौ, आदी कुनै कुरामा पनि चाख लाग्दैन । परिवारले हेर्दा न ज्वरो, न दुखाई , केहि पनि त छैन किन यस्तो गरेको होला भन्ने लाग्छ । डिप्रेसन भएको व्यक्तिलाई भने कुनै कुरामा रमाईलो नलाग्ने हुनाले समस्या देखिएको हो।
डिप्रेसन हुने कारणहरु धेरै छन जस्तै:
केहि शारिरीक रोगहरुका कारण, थाइराइडको समस्या, मधुमेह, हृदय रोग, वाथ वा अन्य दिर्घ रोगमा डिप्रेसन हुन सक्छ
केहि औषधी सेवन गरेका कारण पनि डिप्रेसन हुन सक्छ
शारिरिक यातनाका कारण र यौन शोषण/वलात्कार भएका कारण
भावनात्मक चोटका कारण
वाल्य अवस्थामा भएका, अनुभव गरेका अप्रिय घटनाका कारण
कुनै पनि कारण न भैकन आफु भित्रैबाट निस्कने/हुने डिप्रेसन
हामीले जाडोमा हुने डिप्रेसनको कुरा गर्दै थियौ । यो हुने कारण हाम्रो जैव–चक्रीय आवर्तन(Circadian Rhythm) मा गडवडी भएर हुन्छ भन्ने छ । यो सरकाडिएन रिदमलाई इन्टरनल कल्क पनि भनिन्छ । हामी राती जाग्यौ भने अन्दाजी यति वज्यो होला भनेर अनुमान यसको मद्दतले गरिन्छ । विहान ४ वजे नै जागेर तयार हुनु छ भने पनि यसले नै ४ वजे जगाउछ । निन्द्रा ठिक समयमा लाग्ने र विहान ठिक समयमा खुल्ने पनि इन्टरनल कल्कले गर्छ । सरकाडिएन रिदम गडवड भयो भने समयमा निन्द्रा नआउने, या साझ पख नै निन्द्रा लाग्ने, या ज्यादै वढी निन्द्रा लाग्ने जस्ता समस्याहरु हुन्छन ।
जाडो याममा हुने डिप्रेसन कार्तिक मंगसीर तीर सुरु हुन्छ र चैत, वैशाख तीर हराउदै जान्छ वा निको हुन्छ । यदि कसैलाई पहिले देखि नै डिप्रेसन छ भने जाडो महिनामा बढछ । जाडोयाममा हुने डिप्रेसनलाई Seasonal Depression पनि भनिन्छ र यसका लक्षणहरु केहि फरक खालका हुन्छ ।
डिपे्रसनमा भोक नलाग्ने र निन्द्रा नपर्ने हुन्छ तर जाडोयामको डिप्रेसनमा भोक वढी लाग्ने र निन्द्रा पनि बढी लाग्ने हुन्छ। धेरै खाना खाएका कारणले वजन वढन समेत सक्छ । डिप्रेसनले वा जाडोयाममा हुने डिप्रेसनले काममा वाधा पर्छ, पढाईमा वाधा पार्छ र आफ्नो दैनिकीमा असर पारेकै हुन्छ ।
सरकाडिएन रिदम वा इन्टरनल कल्क सकभर गडवड नहोस भन्ने हो भने सधै जसो एउटै समयमा सुत्ने र ठिक समयमा उठने गर्नुपर्छ । आधा घण्टा अगाडी पछाडी भएर फरक पर्दैन अर्थात आधा घण्टा छिटो वा ढिलो सुत्न सकिन्छ र त्यसरी नै विहान उठन सकिन्छ । जतिवेला मन लाग्यो सुत्ने र उठने वानीले इन्टरनल कल्कमा गडवडी आउछ ।
जाडोयाममा हुने डिप्रेसनको कारण सूर्यको प्रकाश सँग पनि जोडिएको छ । जाडोमा घाम ताप्न कति आनन्द आउछ सवैले अनुभव गरेकै कुरा हो । डिप्रेसनको औषधीको अलावा Light Therapy ले पनि जाडोयामको डिप्रेसनको उपचार गरिन्छ ।
Six Best Doctors को हुन वा के हुन ?
सुर्य र सुर्यको ताप र प्रकाश–वनस्पती, विरुवा, फूलहरु र समस्त प्राणी जगतको लागी अती आवश्यक मानिन्छ।
आराम(Rest and Sleep) ले उर्जा दिन्छ, रोगसँग लडने क्षमता वढछ।
शारिरिक व्यायाम -डिप्रेसन लगाएत धेरै रोगहरुबाट वचाउछ र स्वास्थ्य राम्रो राख्छ।
खानपिन वा आहार – हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो राख्न महत्वपूर्ण योगदान स्वास्थ्यकर आहारले गर्छ।
आत्मविश्वास – म गर्न सक्छु र गरेर देखाउछु भन्ने विश्वासले अगाडी वढाउछ।
साथीभाई(Friends) आफ्ना दुःख सुख वाडने, एक अर्कालाई सहयोग गर्ने घरको परिवार लगाएत साथीहरु।
सवै वालक देखि वृद्धा वस्था सम्म ठूलो महत्व राख्ने यी Six Best Doctors को महत्व वुझने हो र सहि उपयोग गर्ने हो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र धेरै रोगहरु वाट वच्न सकिन्छ ।
जीवन, डर र मृत्यु
Khoj Sanchar October 16, 2020 October 16, 2020
अवचेतनमन, विश्वास र रोगहरुको उपचार
Khoj Sanchar October 8, 2020 October 8, 2020
स्मरण शक्ति बढाउन रंगीन फलफुल
Khoj Sanchar August 13, 2020 August 13, 2020